Dugsiga Hoose - Dugsiga Caalamiga ah ee Lyon
Unugga Sanadaha Hore iyo Dugsiga Hoose
Cutubka Sanadaha Hore (EYU: Ku-meel-gaadhka-, Ka-hor-, Dugsiga Sare iyo Dugsiga Hoose) iyo Dugsiga Hoose (Fasalada 1-5), xiisaha dabiiciga ah ee carruurta iyo xamaasadda ayaa aasaas u ah habka wax-is-weydiinta ee wax-barashada iyadoo la isticmaalayo International Baccalaureate's Barnaamijka Sannadaha Hoose (PYP) kaas oo dugsigu si buuxda loogu aqoonsaday. Tan waxa lagu fuliyaa hab ciyaar ku salaysan EYU.
PYP waxay u diyaarisaa ardayda inay noqdaan kuwo firfircoon, daryeela, wax barta noloshooda oo dhan kuwaas oo muujiya ixtiraam naftooda iyo kuwa kaleba, oo awood u leh inay si firfircoon oo masuuliyad leh uga qaybqaataan adduunka ku hareeraysan. Iyaga oo isticmaalaya qaabka manhajka PYP ee udub dhexaad u ah, macalimiinta ISL waxay abuuraan jawi waxbarasho oo xiiso leh iyo kala duwan taasoo u ogolaanaysa arday kasta inuu horumaro hadba inta uu awoodo. Carruurta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay wadaagaan waayo-aragnimadooda bulsho iyo dhaqameed ee kala duwan iyo inay kobciyaan awoodda ay u leeyihiin inay si falanqeyn ah u fikiraan, sameeyaan isku-xirnaansho oo ay noqdaan kuwo madaxbannaan oo ka qaybqaata hal-abuur leh waxbarashadooda. Horumarkooda shakhsi ahaaneed waxaa lagu kobciyaa Profile-ka bartayaasha oo udub dhexaad u ah PYP iyo guud ahaan falsafada IB.
Hababka kala duwan ee qiimaynta, oo ay ku jiraan is-milicsiga ardayga iyo qiimaynta naftiisa iyo asaaga, waxay ogolaataa qiimayn joogto ah ee habka waxbarashada iyo jawaab celinta joogtada ah ee carruurta iyo waalidka labadaba.
Marka laga soo tago luqadda (akhrinta, qorista iyo isgaarsiinta afka), xisaabta, sayniska, tignoolajiyada iyo cilmiga bulshada, waxaan bixinaa farshaxan muuqaal ah oo qani ah, muusig, dhaqdhaqaaq iyo barnaamij riwaayadeed si loo kiciyo hal-abuurka dhammaan qaybaha manhajka iyo toddobaadlaha xoola-dhaqatada, bulshada iyo fadhiyada waxbarashada jirdhiska ayaa sii wanaajinaya horumarka shakhsi ahaaneed. Ardayda dugsiyada hoose waxay sidoo kale ka faa'iidaystaan ​​barnaamijka PE-da oo dheellitiran oo ku jira jadwalkooda toddobaadlaha ah, iyagoo isticmaalaya tas-hiilaadka sida jimicsigayaga yar iyo dhul-ciyaareedka badan ee astro-cawska ee dhawaan la rakibay. Ardayda dugsiga hoose waxay sidoo kale ku raaxaystaan ​​isticmaalka barkada dabaasha ee dawlada hoose qayb ahaan sanadka.
Bilawga Luqadda Ingiriisiga ee fasalka 1-aad iyo wixii ka sareeya waxa taageero loogu fidiyaa ESOL (Ingiriisi loogu talagalay Ku-hadlida Luuqadaha kale) oo kharash dheeraad ah lagu bixiyo haddii loo baahdo dhammaan carruurtuna waxay bartaan Faransiis sidii af shisheeye ama waddan waddan.
EYU iyo Ardeyda Hoose waxay ka faa'iideeystaan ​​booqashooyin iyo safarro badan oo ka baxsan dugsiga oo ku xiran Cutubyadooda Weydiinta, iyo dhammaan fasallada Fasalka 1-5 waxay ku raaxaystaan ​​safar degaan oo sannadle ah ugu yaraan saddex maalmood ah. Dugsigu waxa uu mudnaan siiya safarada Faransiiska ama wadamada u dhow ee xuduudka la leh si uu u ilaaliyo raadkiisa kaarboon ugu yaraan iyo in uu ka faa'iidaysto hantida suurtogalka ah ee la heli karo iyada oo aan aad u fogayn.
Dugsiga hoose waxa uu maray booqasho qiimaynta IB PYP bishii Oktoobar 2021, iyada oo ay ka soo baxeen warbixino cajiib ah kooxda soo booqatay kuwaas oo tilmaamayay in dugsigu buuxiyay dhammaan shuruudaha dib-u-xidhashada IB. Abaalmarinta ugu weyn ee ISL, si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd inay ka maqlaan iyaga in kelmadda ay inta badan maqlaan wareysiyada ardayda, macalimiinta iyo waalidiinta ay si isku mid ah u ahaayeen 'farxad'!
Qaabka Manhajka Sannadaha Hoose ee IB (PYP).
Faahfaahinta manhajkeena aasaasiga ah, fadlan kala tasho dukumeentiyada PYP:
Hagaha manhajka aasaasiga ah ee ISL
Mawduuca aasaasiga ah laga filayo
Barnaamijka aasaasiga ah ee weydiinta
NB Dhammaan waxbarida iyo barashada PYP waxaa taageera ISL's Aragtida, Qiimaha iyo Himilada iyo Profile Bartayaasha IBO.